Yaa Burburiyay Magaalada Hargeysa, Sanadkii 1988-kii, Ma Jeneraal Morgan Mise Jeneral Axmed Warsame?W/Q Suleyman Yusufdhakhtar | Berberatoday.com
Yaa Burburiyay Magaalada Hargeysa, Sanadkii 1988-kii, Ma Jeneraal Morgan Mise Jeneral Axmed Warsame?W/Q Suleyman Yusufdhakhtar
Yaa Burburiyay Magaalada Hargeysa, sanadkii 1988-kii, Ma Jeneraal Morgan mise Jeneral Axmed Warsame?.
Beryahan saxaafada Soomaalidu waxay ka warameysey in kursigii xildhibaanimada ee Dawlada Federaalka Soomaaliya loo diiday Jeneraal Maxamed Siciid Xirsi Moorgan, waxayse Soomaalidu ayna ogayn in ninkii xasuuqii ugu xumaa taariikhda dhulka Soomaalida ka dhaca, ee dhulka la simay caasimadii labbaad ee Jamhuuriyadii Soomaalidu. inuu maanta Baarlamaanka Soomaaliya uu dhex fadhiyo oo uu xubin ka yahay. Ninkaasi waa Jeneraal Axmed Warsame.
Jeneraal Axmed Warsame. waxaa loo soo bedelay inuu noqdo Taliyihii ciidankii qaybtii 26-aad ee magaalaada Hargeysa, kalabadhkii bishii lixaad ee sannadkii 1988-kii, xiligaas oo mudo labba usbuuc ah uu dagaal ka soconaayay magaalada Hargeysa, waxaana lagu bedelay Jeneraal Moorgan oo taliye ka ahaa qaybtaas 26-aad.
Haddaba Muxuu Sameeyay Jeneraal Axmed Warsame?.
Mudo bil ku dhow ayuu Jeneraal Axmed Warsame, wuxuu usugu keenay magaalada Hargeysa, wixii ay xoog iyo ciidan lahayd dawladii Soomaaliya, hadday Madaafiic tahay, hadday Diyaarado tahay, hadday Baabuurta Gaashaaman tahay, hadday Gantaalo tahay , iyo nooc kasta oo hub iyo ciidan wixii uu heli karaayey ah, ama Soomaali ha noqdaan ama Calooshood u shaqaystaashii Diyaaradaha wadday ha noqdaane.
Haddaba maalinnimadkii 17.July.1988-kii, ayuu Jeneraal Axmed Warsame, wuxuu amar ku bixiyay in Magaalada Hargeysa la garaaco oo dhulka lala simo, iyadoo Cir iyo Dhul-ba laga duqaynaayo, wuxuuna dajiyay qorshe ah, in HALKII TALAABABA ama Halkii MITIR-BA uu madfac ku dhaco. Labba bilood oo xidhiidh ah ayuu Magaalada Hargeysa cir iyo dhul-ba ka duqaynaayey. Daqiiqad Kasta, Saacad Kasta, Maalin kasta, Habeen Kasta!, iyadoo aan kala joogsi lahayn.
Amaradii uu bixiyay oo maanta iyagoo Fiidyow ah oo cajalad ku duuban la heli karo, waxaa ka mid ahaa, inaan cidna la dhaafin, hadday dhaawacii shicibka tahay, hadday Dumar tahay, Hadday Caruur tahay, nooc kasta oo bini aadam ah in la laayo ayuu go’aamiyay!. Isagoo tiiq-tiiqsanaaya oo ciidankiisii amar faraaya waa ninkii yidhi “Waa inaynu sifaynaa, oo Dhaq dhaqaaq xarakaad. Tuke mooyee waa in wax kale la waayaa”.
Mudadaas labbada bilood ah, July ilaa September 1988, Jeneraal Axmed Warsame wuxuu magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda ku dilay, shacab lagu qiyaasay ilaa sodon kun oo qof, wuxuuna ku dhaawacay dad kor u dhaafaya Konton Kun. Waxaana qaxoonti noqday oo magaalada ka qaxay guud ahaan shacabkii degenaa oo Itoobiya nafahooda ula cararay, dadkaas oo ka badnaa ilaa labba boqol iyo konton kun oo qof.
Ninkii waxaas oo denbi iyo xasuuq ah geystay, wuxuu ka tirsanyahay oo waliba muddo shan sano ahna ka tirsanaa, Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Waxaase la yaableb denbiyada ninkaasi geystey inay ku soo boqol jibaar mayaan denbiyada uu geystey Jeneraal Moorgan, oo loo diiday inuu galo baarlamaanka Soomaaliya.
Gacan ku dhiigle Jeneraal Axmed Warsame, danbiile ka wayni maanta Soomaaliya kuma noola.Xasuuqa uu geysteyna Sarkaal ciidan oo geystey oo maanta Soomaaliya ku nooli ma jiro, Waase danbiile qarsoomay oo la ilaaaway,, oo xitaa shacabkii Somaliland ee uu xusuuqa intaas leeg uu u geystay ayaan war ka hayn, oo lagaba yaabaa, intooda badani inayna maqal danbiilahaas weyn ee gacan ku dhiiglaha ah. sababtuna waxa weeye, ninkaasi oo xiligii Hargeysa loo soo magacaabay uu dagaal ka socday, shacabkuna ayna war u hayn cida magaalada xukumaysa.
Sababta carabka loogu hayo Jeneraal Moorgan oo isba danbi aan yarayn geestey oo aan u dhowaynse kii uu Jeneral Axmed Warsame geystey, waxa weeye labba sano 1986 ilaa June 1988-kii ayuu ahaa Taliyaha Qaybtii 26-aad ee Magaalada Hargeysa,markii dagaalku dhacay wax yar ka dib ayaana laga bededay, oo ninkaas Jeneral Axmed Warsame la yidhaahdo lagu soo bedelay. Sidaas aawadeed ayaa shacabka reer Hargeysa amaba reer Somaliland oo dhami u haystaan, xasuuqii weynaa iyo dumintii weyneyd ee magaalada Hargeysa inuu Jeneraal Moorgan geystey, waayo dee shacabku isagoo meesha xukuma ayaa ugu danbeysey. Cid uga warantay wixii dhacay iyo talisyada ciidanku sidii ay isu bedeleena ma jirto.
Haddal iyo dhamaan, Dawlada Soomaaliya ee Muqdisho fadhida waxaanu ka codsanaynaa in Gacan ku dhiigle Jeneraal Axmed Warsame, gacanta loo soo geliyo Dawladda Somaliland, Isaga iyo gacan ku dhiiglayaasha kaleba, oo Maxkamad cadaalad ah lagu saaro magaaladii Hargeysa, ee uu baabi’iyay. Haddii ay taas sameyn weydo dawladda Soomaaliyana, Somaliland waxaa la gudboon in ay Hay’ada Sirdoonka Somaliland, qayb qaabil san soo qabashada iyo dabagalka ragii waddankan danbiga ka galay ay samayso. oo halkooda ugu tagto danbiilayaasha, cadaaladana hor keento.
Fadlan sii faafi OO Share-garee, qoraalkan, si gacan ku dhiiglahan, ay u ogaato ummada reer Somaliland iyo guud ahaan ummada Soomaaliduba.
Allaah Ayaa Mahadlleh
All Somalilanderz CUQUBADO HALKII LAGU GALAY AYAY CAW KU HURUDAA !!! OO CARUURTAY KALAYSAA NINKII CAANO BAAS DHAMA !!! (ABWAAN CABDI GAHAYR AHN): TAASAA MAANTA KOONFURTA HAYSTA CUQUBADAY KA GALEEN SOMALILAND BAA KU QARXAYSA KOLBA: